Anya Hawk bụ opaque na-acha anụnụ anụnụ opaque nke microcrystalline quartz - vidiyo
Zụta anya nku anya na ụlọ ahịa anyị
Anya Hawk bụ ọchịchịrị ojii opaque gemstone dị iche iche nke microcrystalline quartz. Ọ bụ mineral nke na-agbanwe n’ime mineral ọzọ n’oge. Nke mbụ bụ ngọngọ, ma emesia “ejiri ya mee” nri. Crocidolite bụ mineral na-acha anụnụ anụnụ nke nwere ezinụlọ riebeckite nke amphibole silicates. Mgbanwe nke okwute ahụ na ebido dịka quartz na-abanye n'agbata eriri nke crocidolite.
A maara nkume a dị nkọ maka ịkọwapụta ya. O di ka anya nku. Ọ metụtara ihu agu na pietersite, ha abụọ na-egosipụta ụdị nkarịta ụka. Agu anya bu ihe eji eme ka amuma dika ihe di elu.
Bee, ọgwụgwọ na nṅomi
Agwọ gwọstiki nke anya Hawk bụ nke a na-elezighi anya ma ọ bụ kwalite ya n'ụzọ ọ bụla.
A na-enyekarị bara nnukwu uru ka a na-eji cabochon mee ka ha gosipụta nkwurịta okwu ha. A na-emepụta nkume uhie site na iji ọgwụgwọ ọkụ. A na-eme ka nkume gbaa ọchịchịrị dị mma iji meziwanye agba site na iji ọgwụgwọ nitric acid.
Otu iko fiber optic bụ ihe a na-ahụkarị anya agu, ma na-emepụta ya n'ọtụtụ ụcha. Anya Tiger na-esite na South Africa na ọwụwa anyanwụ Eshia.
Mpempe microcrystalline bụ nchịkọta nke quartz kristal nke a na-ahụ anya naanị n'okpuru ịdị elu. Varietiesdị ụdị nke cryptocrystalline bụ translucent ma ọ bụ nke ihe na-adịghịkarị mma, ebe ụdị ndị na-apụta ìhè na-abụkarị macrocrystalline. Chalcedony bụ silica cryptocrystalline nke silica nke nwere ezigbo intergrowths nke ma nke quartz, yana momite monoclinic polymorph. Odị okwute gemstone ndị ọzọ nke quartz, ma ọ bụ nkume gwara ọgwa gụnyere quartz, oge ụfọdụ gụnyere ma ọ bụ usoro iche iche na agba. agate, carnelian ma obu sard, onyx, heliotrope, na jasper.
Anya anya Hawk pụtara
Dika ihe eji egwu egwu, a na - anata okwute a dika ihe mmuo nke n’ewuputa ulo kpuchie ihu ya iji kpuchido ihe iyi egwu nke ndu. Ghọtara ịgagha mkpụrụ obi, ọ na-eweta ihe ọmụma na idoanya na echiche iji hụ eziokwu nke ndụ.
Anya Hawk, sitere na South Africa